OweTrompies ufuna ukuhlanganisa uJub Jub nemindeni | News24
OweTrompies ufuna ukuhlanganisa uJub Jub nemindeni
Johannesburg – Umculi weKwaito olungu leqembu lodumo iTrompies u-Eugen Mthethwa uveze ukuthi uzimisele ukuhlanganisa uMolemo Jub Jub Maarohanye nemindeni yezingane ezashona nezalimala.
ISunday Sun ithole ukuthu u-Eugene obuye abe yibamba likaNobhala Jikelele wenyunyana iCreative Workers Union usezinhlelweni zokudingida indlela eya phambili noJub Jub owazakhela udumo ngengoma Ndikhokhele nemindeni yezingane.
UJub Jub noThemba Tshabalala bagwetshwa iminyaka eyishumi ngemuva kokushayisa izingane zesikole ezinye zashona kwathi ezinye zasala ziyizinkubela ngemuva kokuqhudelana ngezimoto emgwaqweni omncane ngo-2010.
OLUNYE UDABA: UJub Jub izophinde azame inhlanhla
U-Eugene utshele leli phephandaba ukuthi ngemuva kokuzwa izingoma zikaJub Jub ezine okubalwa kuzo Phind’ Ukhulume, Jerusalema, Ndikhokhele ne-Iyeza kumeze wabona ukuthi lo mculi ungumuntu osondelene noNkulunkulu.
“Wayezimbandakanya nabantu abangalungile kodwa izingoma zakhe ziveza okusenhliziyweni yakhe.
Angiphikisani nokugwetshwa kwakhe kodwa ngokwemfundiso yebhayibheli ethi uma umuntu evuma futhi ekhombisa ukuzisola ngesono sakhe kumele axolelwe,” kusho u-Eugene enanela ngokuthi uzoqale ahlangane nalo mculi bese eyohlangana nemindeni ethintekayo ukuze kubonakale ukuthi ayikho indlela eyaphambili engaqhamuka.